သတင်းများ | Invest Myanmar Summit 2019
08 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
Myanmar’s recent transition out of five decades of economic and political isolation provides an opportunity for the country to secure much needed investment to build …
06 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
In its efforts to draw investments into the country, the Myanmar Government recently establishedanew Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, paving the …
The Myanmar Sustainable Development Plan and the Project Bank by H.E. U Set Aung, Deputy Minister of Planning and Finance
05 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
On Day Two of the Invest Myanmar Summit 2019, H.E. U Set Aung, Deputy Minister of Planning and Finance spoke about the Myanmar Sustainable Development …
04 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
In August 2018, the Ministry of Planning and Finance published the Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030). The government’s master plan for the development of the …
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပိုမိုအလေးထား ဖော်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့သမိုင်းဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီး အစည်းအဝေးကြီးတွင် ထပ်လောင်းကတိပြု
ပထမဦးဆုံးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေး Invest Myanmar Summit 2019 ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တည်ငြိမ်ပွင့်လင်းလှိုက်လှဲသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်အား ဖော်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြု၍ လွန်ခဲ့သောအပတ် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးပထမနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ၁၀ ခု …
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်၏ အနာဂတ်အတွက် သမိုင်းဝင်မည့် ပထမဆုံး နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Invest Myanmar Summit 2019 တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ “ယခုအချိန်သည် မိမိတို့အားလုံး ရဲရင့်ပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးစွာ ထားရှိရတော့မည့် ကာလ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား”
01 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် ၁၂ ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ၁၀ ဦးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် ၁၅၀ ကျော်နှင့် ပါဝင်တက်ရောက်သူပေါင်း ၁၆၀၀ နီးပါး မကြုံစဖူး တက်ရောက်ခဲ့ ပထမဆုံး တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ၁၀ခု၏ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ …
Welcome Remarks by U Zaw Min Win, President of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)
IIn his welcome remarks, U Zaw Min Win, President of UMFCCI said the Invest Myanmar Summit 2019 aimed to “create awareness and elevate the endeavours” …
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၌ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (၂) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Invest Myanmar Summit 2019 တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မူဝါဒဆိုင်ရာမိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်
29 ဇနျနဝါရီ 2019
ပထမဆုံးနေနဲ့ ပြောကြားလိုတာကတော့ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 ကို တက်ရောက်ကြတဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံက ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါ ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီနေ့အခမ်းအနားက ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး …